Ihe nkesa nke 120W na-ekpuchi ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Ngwongwo na-ekpuchi ihe maka ogwe osisi,Kuki Ezuzu Azu High Bay,Ngwongwo Ngwongwo nke Azu Maka Umu Ozo
Home > Ngwaahịa > Ihe nnweta ozuzu ọkụ > Ihe nkesa nke 120W na-ekpuchi ọkụ
Ihe Nlereanya.: BB-SDD-120WD1
AKWỤKWU NDỊ KWURU - Bbier 120W Akpa Ngwongwo Azụ maka Ogwe Uhie kwadoro ngwa gị na ngwa ngwa nke kachasị mma. Nke a na- erechasị kits High Bay nwere ihe kachasị emetụ n'ahụ nke 120LM / W na iji mgbapụta na-arụ ọrụ ike ma na-arụ ọrụ maka mgbanaka 400-watt metal halide na nrụgide sodium dị elu.
MGBE OGE OCHIE - Site na nnukwu onye ọkwọ ụgbọ ala na ndị na-acha ọkụ ọkụ, ihe ndị dị n'ime Aluminom, ihe ọkụkụ na-egbuke egbuke, 120W Led Retrofit Kit for Light Lights na- enye ngwa ngwa nke ndụ 50,000 ma were ya na ezigbo mma.
ETL / CETL RATED - ETL maka nchekwa, ahapụtara maka 110-277vlts. Kuki Kuki nke 120W L nwere ike dochie 300W-400W HPS / HID / MH, n'enweghị nsogbu na mfe.
Mfe echichi - Easy echichi maka Bbier 120W L ed Retrofit Kit maka ite ọkụ. Nke a 120W W holesale Mere Retrofit Kit bụ nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na-arụ ọrụ ngwa ngwa, karịsịa maka Wall Pack Light, Mpempe ụgbọala / Gburugburu Gburugburu, Light Street, Ọdụm Gas ma ọ bụ Ìhè.
5 EKWUKWỌ ANYỊ BỤRỤ AKA - Ihe niile anyị na-eji ọkụ na-acha ọkụ azụ bụ Kitrị Afọ 5.
Ngwongwo na-ekpuchi ihe maka ogwe osisi Kuki Ezuzu Azu High Bay Ngwongwo Ngwongwo nke Azu Maka Umu Ozo